Hogaamiyayaasha Israel ayaa dhowaanahan ka hadlayey doorashada Britain ayada oo Yahuudda UK ay walaac ka qabaan in Corbyn loo doorto ra’iisul wasaare, kuwaas oo qaarkood xitaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ka haajiraan UK, haddii uu guuleysto.
Wasiirka arrimaha dibedda, Israel Katz oo maanta la hadlayey Raadiyaha ciidamada Israel, ayaa sheegay in Israel aysan faro-gelin doonin doorashada dal kale, balse shakhsiyan uu rajeynayo in Corbyn aan la dooran.
Xisbiga Labour-ka weli kama jawaabin hadalka Israel.
Katz ayaa si kastaba hoos u dhigay suurta-galnimada in haddii la doorto Corbyn uu hoos u dhici doono xiriirka amni ee Britain iyo Israel, oo ay ku jirto inay wadaagaan sirdoonada la xiriira dhaq-dhaqaaqyada kooxaha Islaamiyiinta.
“Hoggaamiyayaasha dantooda gaarka ah darteed uma waxyeeleeyaan dalkooda, balse waan ka wada hadli doonnaa taas.”
Corbyn ayaa marar badan diiday eedeymaha ku saabsan inuu neceb yahay Yahuudda.